abcnepali | » के हुन्छ पब्जीमा ? प्रतिबन्ध किन ? के हुन्छ पब्जीमा ? प्रतिबन्ध किन ? – abcnepali
सरकारले बिहीबार पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जाल तरंगित बनेको छ । पब्जीमा भुल्नेहरु सरकारको निर्णयबाट स्तब्ध बनेका छन् ।
आखिर एउटा भिडियो गेममाथि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? त्यसको चर्चा गर्नु अगाडि पब्जी खेल के हो र कसरी खेलिन्छ भन्ने बुझौं ।इन्टरनेटका माध्यमबाट मोबाइल र कम्प्युटरमा खेलिने यो खेल तपाईँले खेल्नुभएको छैन भने पनि अरुले खेलेको देख्नुभएकै होला या, कुराकानी गरेको त पक्कै सुन्नुभएको छ ।
यद्यपि, व्यवहारिक पाटोमा यो प्रतिवन्धलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन सक्छ । यो एपलाई डाउनलोड गर्नै नमिल्ने बनाउने हो वा खेल्नेलाई कारवाही गर्ने हो भन्ने सरकारले प्रष्ट पारेको छैन ।अनलाईन खबर